इस्मा गाउँपालिकाद्धारा ३३ करोड ५५ लाखको बजेट प्रस्तुत - Butwal Online
इस्मा गाउँपालिकाद्धारा ३३ करोड ५५ लाखको बजेट प्रस्तुत
खानेपानी, खरका छाना तथा कृषिलाई प्राथमिकता
गुल्मी, १० असार । इस्मा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले ३३ करोड ५५ लाख ५२ हजारको बजेट गाउँसभामा पेश गरिन् ।
इस्मा गाउँपालिकामा बजेटले कृषि तथा पशु, खानेपानी, खरका छाना विस्थापन, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रले प्राथमिता पाएका छन् ।
घर–घरमा कृषि र पशु प्राविधिक
इस्मा गाउँपालिकाले कृषिको विकासका लागि ‘समृद्ध इस्माको आवश्यकताः कृषि र पशुपालनमा व्यवसायिकता’ भन्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यसअन्तरगत उत्पादनमा आधारित अनुदान, पशु बीमाको लागि कृषकको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले अनुदान दिइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै घर घरमा कृषि तथा पशु प्राविधकि सेवा उपलब्ध गराउने, कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन, तरकारी, फलफुल, कफी, मासु दुध, उत्पादनलाई पकेट र ब्लक बनाइ व्यवस्थित रुपमा संचालन गरिने भएको छ । जसको लागि १ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । भने सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि आठ लाख लागि विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटकिय क्षेत्रको लागि ६० लाख
इस्मा गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ हस्चितौरमा होमस्टे संचालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै धार्मिक महत्व बोकेको इस्माकोट दरबार सहित माइकास्थान, देउराली लगायतका क्षेत्रको विकास र प्रचारका लागि ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिका स्तरीय युवा समिति गठन गरी स्रोत साधनको परिचालन गर्नका लागी १० लाख विनियोजन भएको उपाध्यक्ष के.सी.ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले गुल्मीकै पहिचानको रुपमा रहेको बुल्म सेरामिक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण, मेशिन औजारको तथा गाउँपालिका स्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ । पञ्चेबाजा, लोक दोहोरी, परम्परागत नाँच संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ११ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख
गाउँपालिकाले समग्र शिक्षाको विकासको लागि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । वडा नं. ३ का विद्यालयबाट अनिवार्य शिक्षा लागु गरिने, बालविकास केन्द्र, पूर्व प्राथमिक कक्षा र कक्षा १ मा टिकाउ दर र सिकाई उपलब्धि बृद्धि गर्दै लैजाने र उत्तीर्ण दर १०० प्रतिशत पु¥र्याउने पनि लक्ष्य लिइएको छ ।
भने पठनपाठनलाई विद्यार्थीको नतिजासँग आवद्ध हुने गरी विद्यालय तथा शिक्षकलाई पुरस्कारको र दण्डको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
सुत्केरीको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
इस्मा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । दर्लामचौर स्वास्थ्य चौकिमा प्रयोगशाला सेवाको शुरुवात गर्ने, गाउँगाउँमा निःशुल्कस्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश भएका छन् ।
त्यस्तै आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच अभिबृद्धि गर्न वडा नं. ४ मा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिकलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने, गाउँपालिकामै अत्यावश्यक खोपहरुको सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।
वर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमीहरुको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने लगायतका समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि ५० लाख बजेट गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको छ ।
दुई गौरवका योजना
गाउँपालिकाले विभिन्न गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ३ वर्ष भित्रमा प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन ‘एक घर एक खानेपानी धारा’ निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
जसका लागि १ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका निर्माण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम अवलम्बन गरिने भएको छ । वातावरण मैत्री चक्रपथको रुपमा राडडाँडा–हर्पूकोट–नयाँपोखरा–दोहली–इस्मा मैदान–दोवाटा–सिरार–चोरकाटे–बुल्म–हुलाके–राहले–पालुखा–छल्दी पनाहा–राडडाँडा सडक निर्माणका लागी पनि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रत्येक वडामा खेल मैदान
इस्मा गाउँपालिका प्रत्येक वडामा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने, गाउँपालिकास्तरिय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने लगायतका कार्यका लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ । हाल वडा नं ४ मा निर्माणाधीन बाल उद्यानलाई सम्पन्न गर्न थप १०लाख विनियोजन भएको छ भने लंैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यका लागी ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
खरका छाना विस्थापनको लागि एक करोड ९० लाख
खरका छाना विस्थापन गरी टिनका छाना लगाउने कार्यअन्तरगत वडा नं १ र ६ लाई खरका छानामुक्त गरिएको छ । बाँकि वडाहरुलाई आगामी बर्ष नै खरका छानामुक्त गराउनको लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक पुग्न नसकेका वस्तीहरुमा यसै वर्ष भित्र सडक पु¥र्याउनका लागि १ करोड ९० लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिका भित्रका वडा कार्यालय देखि गाउँपालिका सम्मका स्थानीय सडकहरुमा सडक हेरालुको लागि ७५ लाख विनियोजन भएको छ । भने विद्युतिकरणको लागि ५ लाख विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष के.सी.ले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाले संरक्षण पोखरी निमार्ण र पानीका स्रोत संरक्षणको लागि २० लाख, पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँपालिका घोषणको लागि १० लाख, गाउँपालिकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापनाको लागि २५ लाख रकम विनियोजन गरएको छ ।
आन्तरिक आय, संघ र प्रदेशबाट निम्न रकम
उल्लेखित बजेटका लागि गाउँपालिको आन्तरिक आय ४० लाख अनुमान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट समानिकरण अनुादनतर्फ आठ करोड ७९ लाख, राजस्व बाडँफाडतर्फ छ करोड ७२ लाख, सशर्ततर्फ १४ करोड नौ लाख ५२ हजार प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदानतर्फ ४१ लाख ३८ हजार, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ६१ लाख ५४ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ८० लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ ५२ लाख प्राप्त हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले जानकारी दिए ।
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खाँदा कस्ता रोग लाग्छन् ? कसरी बच्ने ? जानी राखौँ
कृषि सहकारीलाई अनुदानमा १४ वटा पिकअप गाडी प्रदान
२ करोडको बजेट सिलिङ नपाएपछि वडा अध्यक्षहरु गाउँसभामा अनुपस्थित भएको दाबी
नवलपुरमा आपराधिक क्रियाकलापमा कमि आएन
रोटरी क्लब अफ बुटवल डाउनटाउनको वार्षिक कार्ययोजना पारित
असारे विकास : २ करोडको लागतमा गरेको कालोपत्रे १ महीनामै उप्कियो
पाल्पा रानीमहलको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
नवलपरासीका १० जना बालक जंगलमा सम्पर्क बिहिन
नवलपरासीको दाउन्नेमा भारतीय ट्रक दुर्घटना
पाल्पामा लोभ लाग्दो व्यावसायिक फूलखेती